March 05, 2011 4:21 am
मृत्यु जितेका मान्छे
'गृह'ले ढाक्न नसकेको लज्जास्थल
घरज्वाईंलाई खानको धन्दा कसैलाई के धन्दा - घरज्वाईंलाई खानको धन्दा π ठ्याक्कै आज एमालेको यही स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जित्ने एमालेले खुसी मनाई जनमूखी काममा लागेर जनताबीच फेरि एकपटक ऊ बेलाको नौ महिने दृश्य रिप्ले गरी गत बीस महिने कालमा ध्वस्त जगमा सिमेन्टी भर्नु पर्ने थियो । पर्ूव प्रधानमन्त्रीजीका बेलाजस्तो अराजक, असक्षम, भ्रष्ट, अटेरी, अनैतिक वदमास मन्त्रीहरूलाई छोयो कि पदै गुम्ने डर अबको प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । माओवादीलाई पनि एमालेजस्तै जनतामा आफनो शासनकालमा गुमेको आफ्नो शान र मान पूनर्स्थापन गर्नुपर्ने एक अन्तिम अवस्था थियो । कुनै नेता बिशेषका आफ्नै लुतो कन्याई हुन सक्ला, तर दलका हिसावले दुवै दलका समान पिडा तथा अवसरसमेत भएकोले यस कालखण्डलाई जनताका लागि अविस्मरणीय राहतमूखी बनाउन दुवै दलका सबै खाले नेता लाग्नु पर्ने समयको माग थियो । जनतालाई कुन दल र को नेता भन्नेबारे मतलव हुन छाडिसक्यो । जनता राहत र शान्तिमात्र चाहन्छन् । तितो सत्य यही हो ।तर एमालेमा आफ्नो दलका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि दुखित नेतागणहरू आ-आफ्नै डम्फु बजाएर प्रधानमन्त्रीलाई एकतिरबाट 'नांच नांच' भन्ने अर्कातिरबाट 'खुट्टा भांच भांच' गर्ने काममा महिनैभर दिन दुना रात चौगुना लागेका खवरले अखवार भरिए । पानी नचल्ने भनेभै+m गृह नचल्ने दल भनेर अक्षुतको व्यवहार गरेपछि माओवादीले कुनै पनि हालतमा यो अपमान पचाउन नसक्ने हुनाले कि त गठवन्धन टुट्ने छ र फेरि रामचन्द्रजीका लागि अयोध्या दरवारको ढोका खुला हुनेछ कि त दवाएर ल्याइएको अवस्थामा माओवादीको नूर गिराएको गिरायै गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसाथ यस लफडाको कल्पना गरिएको आरोप पनि माओवादीले लगाइरह्यो । अर्थात दुवै हातमा लड्डु πजनसेना सरकार अर्न्तर्गत आएपछि प्रधानमन्त्री पनि दिने भनी तत्कालीक प्रधानमन्त्री माधवजीले देशलाई निकासतिर लैजाने लक्ष्य राखेजस्तो बुझिने गरी नितान्त एक्लैले गोकर्र्णो साहसी निर्ण्र्ाालिएका कारण प्रचण्डजीले शिविरका सांचो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि मानिन्छ । तर यही माधवजीका साहसिक निर्ण्र्ााा भरमा अघि बढिएको भए पनि, एमालेभित्रैबाट कुनै न कुनै अडान या वहाना बनाई माओवादीलाई नेतृत्वको त के कुरा, गृह, रक्षाजस्ता महत्वपर्ूण्ा मन्त्रालयसमेत दिइने छैन भनेर माओवादी तथा स्वयं झलनाथजीले समेत बुझ्न नसक्नुको नतिजा हो यो हालको एमालेभित्र मच्चाइएको आन्तरिक ववण्डर ।यही ववन्डरले जव ७ बुंदे फेला पार्‍यो, झलनाथजी र माओवादीका लागि हनिमुनको बाटो सुनामी बन्न पुग्यो । एमालेभित्रकै लाहूरेले उर्डाई लैजान आंखा लाएकी भेगकै र्सवसुन्दरी गृहमन्त्रालयलाई समेत जब स्थानीय चाउरे माओवादीले भित्राउन, लिखितमै आपसी सहमति गराइसकिएको खवर छताछुल्ल भयो, तब एमालेभित्र...
February 28, 2011 4:50 am
सहमति वा नाटक के हो एमालेको राजनीति
विवादमा एमाले पार्टी मुछिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिमा पाइला बढाएको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सात बुँदे गरेरे त्यसको वीपरित काम गर्ने शैली देखाएका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले । शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि तरल र अस्थीर राजनीतिलाई सार्थक बनाउने क्रेडिट लिन एमाले अध्यक्ष खनालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहमतिको नाटकीय फन्दामा पार्न सफल भए । पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवस्थापनलाइृ ठोस निष्कर्ष दिन नसक्ने नेता के को अध्यक्ष हुन् ? सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । नेपाली राजनीतिलाई निकास दिने भन्ने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको क्षण क्षण्को बोली नाटकीय शैली मात्र बनेको छ । काँग्रेसको बुई चढ्ने कहिले कहिले कम्युनिष्टको बुई चढ्ने र पछार्ने रणनीति मात्र बनेको छ, एमाले पार्टीको । धोका र व्यर्थेको नाटकीय राजनीति गरिरहेको छ एमाले । कम्युनिष्टको नै बेइज्जत गरिरहेको छ नपुशंक पार्टी एमाले र यसका अगुवाई नेताहरुले । सहमति र सहकार्यलाई जुवाको दाउ बनाउदै आएको एमालेको पछिल्लो राजनीतिक शैलीले कम्युनष्टहरु नै अन्योलमा छन् र जनताहरु एमालेप्रति रुष्ट भइसकेका छन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको १ महिना पगिसक्दा पनि सरकार बिस्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ । पार्टीभित्रै रडाँको मच्चाएर एमाले माओवादीलाई पाखा लगाउन खोज्दैछ तर यो चाल एमालेभित्रको होइन, जसमा बाह्य शक्तिहरुले एमालेभित्र पसेर नेपाली राजनीति र राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोलिरहेका छन् भने एमाले भने त्यसको दूत बनिरहेको छ । नेपाल राष्ट्रियतामा बाह्य शक्तिलाई चहलखेल गर्न किन दिइरहेको छ एमाले पार्टी, अब सच्चा नेपालीहरुको आक्रोश छ र यो आक्रोश चुलिदै गएको छ । सहमतिको नाममा जहिले पनि नाटक गर्छ एमाले । यो उसको जन्मजात गुण नै हो । यता काँग्रेस पनि शान्ति र संबिधानको बाधक नै हो । मिलेर जानुभन्दा पनि काँग्रेस बखडा मात्र उठाइरहन्छ । यसले नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिइरहेको छ । जहिले पनि बालुवाटारमा बैठक बसिन्छ सहमतिका लागि । सम्मेलन, अन्तक्रिया हुन्छ अनि उपलब्धि हात लाग्यो शुन्य मात्र । शनिबार रातिवालुवाटारमा एउटा यस्तै भोज भयो, जसमा केही समय गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने र विस्तारै माओवादीलाई सुम्पने० सहमति बन्यो ।
एमालेको आफुअनुकुल सातबुँदे कतै एमालेकै लागि अभिशाप त होइन
सात बूँदे सहमतिलार्इ एमाले पाटीअनुरुप पारित गरेको छ, एमाले केन्दि्रय पोलिटब्युरो बैठकले । यसबाट एमाले पार्टीभित्रको विवाद त मत्थर भएको छ तर सरकार बिस्तारमा प्रधानमन्त्री खनाललार्इ चुनौती थपिदिएको छ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई पार्टीको नीतिअनुसार व्याख्या गर्दै एमाले केन्दि्रय पोलिटब्युरो बैठकले अनुमोदन गरेको हो । माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षले सात बुँदे सहमति माओवादी एजेण्डा भन्दै संसोधनका लागि दबाब दिएपछि सोमबार बसेको पोलिटब्युरो वैठकले सात बुँदेका महत्वपूर्ण बुँदालाई संसोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटि वैठकले सर्वसम्मतले हुवहु अनुमादन गरेको हो । प्रस्तावमा सातबुँदे सहमतिको मुल मर्म र भावना शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिनु र तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ-’प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सिलसिलामा माघ २० गते नेकपा एमाले र माओवादीका अध्यक्षबीच भएको हस्ताक्षरित सातबुँदे सहमतिको मूलमर्म, भावना र उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई पूण्ता दिनु र निर्धारित समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण्न निर्माण गर्नु हो भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहेको छ ।’एमालेले सातबुँदे सहमतिमा रहेको ‘जनताको समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शव्दलाई हटाएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई अस्वीकार गर्दै एमालेले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै जाने’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यसैगरी सातबुँदेको माओवादी ‘लडाकूहरुको छुट्टै फोर्स बनाउने’ भन्ने बँुदालाई संशोधन गरेर ‘संविधानसम्वत ढंगले जिम्मेवार औपचारिक संस्थाबाट हुने’ भन्ने भाषा राखेर विषेश समितिको भुमिकालाई संकेत गरिएको छ । शान्ति र संविधान प्राप्तिको कार्यमा सबै प्रमुख दलहरुको सहमतिविना सम्भव नहुने भएकाले सहमतिको बाटोमा अघि बढ्दै नयाँ सहमति गर्ने र शान्ति एवं संविधान निर्माणका लागि संविधानसम्वत ढंगले जिम्मेवार औपचारिक संस्थाहरुको अधिकार प्रयोग र कर्तव्य पालनाका प्रश्नहरुमा उक्त सातबुँदे सहमति बाधक नहुने र हुन नसक्ने कुरा हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’ भन्ने कुरा पारित सात बुँदे एमाले व्याख्यामा छ ।
सात बुँदेको अन्त्यष्टि खोजिदै सात बुँदे सहमति एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खनालको टाउको दु:खार्इ बनिरहेको छ । २ दलको २ नेताको गोप्य सहमति त्यो पनि सत्ता भागबण्डा नेपाली राजनीतिमाथिको ठाडो प्रहार भएको राजनीति दल र नागरिक अगुवाकर्ताहरुले ठहर छ । राजनीतिक निकास र शान्ति तथा संबिधान निर्माण्ा भन्दा पनि अस्थीरतातफ सात बुँदले देशलार्इ गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको काँग्रेसको आरोप छ । नेपाली राजनीति अहिले सात बुँदेको ताजा खबर मात्र बनिरहेको छ । को कसको गुट कसरी सकि्रय बन्ने भन्ने मात्र सात बुँदे सहमति एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको आम नेपालीको ठम्यार्इ छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री बनेको ३ हप्ता बित्न लाग्दा समेत नयाँ मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । ७ बुँदे बाट एमाले पार्टीमा खनाल र नेपाल ओली पक्ष बिभाजित भएको छ । नेपाल ओली पक्षले खनाल पक्षलार्इ सरकारमा टिक्नै नदिने स्थिति सृजना गराइदिएको छ । अहिले एमाले पार्टीमा यसको विकल्प खोजदैछ । सातबुँदे सहमतिबारे पार्टी भित्रको विवाद अन्त्य गर्दै शान्ति र संविधानको मूल मर्म अनुरुप कार्यान्यवन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक मंगलबार बस्दै छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीसंग गरेको सातबुँदे सहमति संस्थागत गर्न केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्न लागेको हो । एमालेको बल्खु मुख्यालयमा बस्ने बैठकमा सात बुँदे सहमतिलाई संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई विष्कर्षमा पुरयाउने पार्टी नीति अनुरुप कार्यान्यवन गर्ने भावना अनुरुप संशोधन गर्ने बुझिएको छ । गत माघ २० गते दुई अध्यक्षबीच गरेको सहमतिलाई लिएर एमाले भित्र ध्रुविकरण बढेपछि प्रधानमन्त्री चयन भएको तीनसाता वित्न लाग्दा पनि मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सभासदहरुले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका नाममा राजनीतिमा नतान्न सुझाव दिएका छन् । राजधानीमा जारी बैठकमा विज्ञहरुको प्रस्तावमा टिप्पणी गर्दै सभासदहरुले लोकतान्त्रिकरणका नाममा नेपाली सेनालाई राजनीतिमा तानिए देश गम्भीर दुर्घटनामा फँस्ने चेतावनी दिए । सात बुँदेको विवाद गृह मन्त्रालयको भागबण्डा पनि प्रमुख समस्या हो । जसका कारण प्रधानमन्त्री खनाल अप्ठ्‍यारोमा परेका हुन् । यो समसयालार्इ हटाउन प्रधानमन्त्री खनालले गृह मन्त्रालय कसैले नपाउने दाबी गरेका छन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रालय विवाद सात बुँदेको बाधक नभएको खनाललको दाबी छ ।
नेपाली राजनीतिमा भारतीय चहलखेल किन फेरि ?
नेपाली राजनीतिकको इतिहासको सम्बन्ध भारत हो । जे पनि कामकाज र राजनीतिक गतिविधहरु नेपालमा हुने गर्छन्, ती सबै भारतको निर्दशनमा हुने गरेका छन् । राणकालीन शासन होस् या राणकालीन अन्त्य, पञ्चायत काल होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको कु सबै भारतीय चहलखेलका राजनीतिक अस्तुहरु हुन् तर पछिल्लो समय हाल नेपालको राजनीतिको रिमोट नेपाल नै भएको खुलासा भएको छ । एमालेका अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीको रिमोट एकीकृत नेकपा मओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भएको प्रकाशमा आएको छ । यसबाट अब नेपाली राजनीतिको रिमोटलाई नेपाली आफैले प्रयोग गर्न सक्नेछन् भन्ने त देखाएको छ तर पनि यो अवस्था हाम्रो मित्र राष्टङ भारत सरकार र भारतीय राजनीतिलाई सह्या भएन । अनि अनेकन असंन्तुष्टि भारतले व्यक्त गरिरहेको छ । बिभिन्न वाहन थुनछेकको राजनीति भारत फेरि नेपाली राजनीतिमाथि गर्दैछ । भारतीय मिडियाहरुमार्फत भारतको सहयोगबिनाको नेपाली राजनीतको कुनै तुक नरहेको समाचारहरु प्रकाशमा ल्याएर फेरि भारत पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको छ । अहिले भारतको चासो माओवादीमाथिको हस्तक्षेपको राजनीति शुरु भएको छ । एमाले माओवादी ७ बुँदे सहमतिमा गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने शर्त थियो तर पछि एमालेका केही नेताहरु बखडा झिकेर भारतीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयकै ठूलो विवाद उत्पन्न गराएर नयाँ सरकार गठन र बिस्तारमा ढिला गराउने दक्षिणपन्थी ध्रुबीकरण पनि नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ताजा अवस्था हो । तर यो नेपाल र नेपालीका लागि सही राजनीत होइन । देशको राजनीतिक समस्या विदेशीलाई दिएर विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्ने की नेपाली नेपाली मिलेर सहयो र मेलमिलापको शान्ति स्थापिय गराउने । यो जिम्म नेपालका राजनैतिक दलका शिर्षथ नेताहरुलाई जान्छ । नेपाली राजनीतकबाट नेपाली जनताले कहिल्यै शान्ति र राहतको अनुभूति गर्न पाएनन् । बेरोजगार, अपराध, महंगी र भष्टाचार उपहार पाइरहेका नेपाली जनताहरुको राजनीतिप्रति घृण पैदा गराएो अवस्था छ । १० वर्षे जनयुद्ध गरेर जनताको पक्षमा वकालग गरेको पार्टी माओवादी पनि पार्टीभित्रै सच्चिनु जरुरी छ । नेपाली राजनीतिकमा फेरि माओवादीले सहमति र सहकार्यको राजनीतलाई विश्वास दिन र दिलाउन पनि सकिरहेको अवस्था छैन । माओवादी पार्टीको नीति हेर्ने हो भने जनपक्षीय राजनीति नै हो तर त्यसलाई लागू गर्न पनि माओवादी चुकेको छ । तर यसबाट अब सबै पार्टीले पाठ सिक्नुपर्ने बेला आइरहेको छ । नेपालको खिचातानी राजनीतिक सत्ता हत्याउने दाउपेच र स्वार्थका कारण विदेशीले सहजै चहलखेल गर्न पाइरहेका छन् । पछिल्लो राजनीतिकमा गृह माओवादीलाई दिनुहुन्न भनेर भारतीय राजनीतिले नेपाली राजनीतकमाथि मिडिया प्रचार राजनीतिक हस्तक्षेपको राजनीति शुरु...
७ बुँदे विवादित राजनीति गृहमा नेपाली राजनीतिकमा एमाले र माओवादीको पछिल्लो गठबन्धनले देशको राजनीतिक अस्थीरतालार्इ हटाउने अपेक्षा सबैले गरेका थिए तर परिणाम उलटोतिर उन्मुख देखिन्छ । खनाल र दाहालको लिखित ७ बुँदे सहमति नेपाली सशकार्य र सहमतिको राजनीतिक एकताप्रति गम्भीर प्रहार भनेको छ काँग्रेसले भने अन्य राजनीतिक दलहरु पनि सशंकित छन्‍ भने अहिले ७ बुदे सहमति नै एमाले माओवादीलार्इ टाउको दुखार्इ बन्दै गएको छ । पालैपालो सत्ता चलाउने र नया गठबन्धन बनाउने लगायतका कुरामा खनाल र दाहालबीच ७ बुदे लिखित सहमति भएको खुलासा भएपछि नेपाली राजनीतिकमा ठूलो हलचल ल्यायो । माओवादी एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बिवादले नै नया मन्त्रिमण्डल बिस्तार ढिलार्इ भइरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको रिमोट
माथिको शीर्षकले बताएको जो कोहीलाइ पनि अब नौलो विषय हो भन्ने नलाग्ला तर कतिपयले भने विश्वास पनि नगर्लान्। जो नेपाली राजनीतिकको विषयमा केही जान्दैनन् उनीहरुले नपत्याउनु स्वभाविकै हो । यसो भनिराख्दा नेपाली राजनेताहरु राजनीतिकमा असक्ष्म नै छन् भन्न खोजिएको हो त ? गम्भीर प्रश्न उठ्‍न सक्छ तर व्यवहार र नेपाली राजनीतिक गतिविधिले यही देखाएको छ । जे कुरा हुन पनि भारतकै भर पने राजनीतिक संस्कार नेपालको पहिलेदेखि चलिआएको संस्कार हो । पछिल्लो राजनीतिक भने नेपालकै रिमोटबाट चलेको आभास गर्न सकिन्छ तर विश्वस्त हुने ठाउ भने छैन । नया प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रिमोटबाट चलेको हो त ? यदि सही हो भने अब नेपालीले गर्व गनर्ुपर्दछ किनकी सबै राजनीतिक उतारचढाव भारतीय हस्तक्षोपमै हुने गरेका छन् नी त । झलनाथ खनाल प्रचण्डकै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने रहेछन्, कम से कम यो रिमोट नेपालकै त हो नि । माधव नेपालको सरकार त भारतको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्थ्यो । रिमोट कन्ट्रोल देशकै हुनुमा गलत के नै छ र ?
बत्तीको सवाल हैन,लोडैलोडको लोडसेडिङ लोडसेडिङको बहुआयमिक चरित्र हुन्छ तर यो बुझ्ने मानिस नगण्य सङ्ख्यामा छन् । त्यसले गर्दा विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ गर्नासाथ जनताको कोपभाजन बन्न पुगिहाल्छ । त्यसको प्रमाण ठाउँठाउँमा जनताले जुलुस निकालेर टायर बालेर अनि चर्को नाराबाजी गरेर विद्युत् प्राधिकरणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ ।
February 06, 2011 6:22 am
किङमेकर कमरेड ! लडाकुलाई प्रधानमन्त्री मातहतको विशेष समितिमा ल्याउने शक्तिखोर समारोहलगत्तै राजधानी फर्केपछि दाहालले संवादाताहरूलाई प्रष्टै संकेत गरेका थिए- सके आफैं, नसके खनाल। दाहाल झन्डै-झन्डै सहमतिको प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। एकाएक गोकर्ण बैठकमा 'सत्ताका लागि सहमति' नगर्ने भन्ने स्थितिमा उनी आइपुगे। र, लडाकु समायोजनपछि दुईतीन सातामै उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रिया रोकियो।आमजनमानसमा देखिएको आक्रोशलाई उनले राम्रैसँग अनुभूत गरेका रहेछन्। आखिर एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई मुलुकको वास्तविक 'किङमेकर' साबित गरेका छन्।
दाहालले एउटा निर्णयबाट भारत, आफ्नै पार्टीभित्रको फरक मत, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो अपरिहार्यताको सन्देशसमेत दिएका छन्। खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्न दाहाललाई सजिलो थिएन। पालुङटार बैठकदेखि लगातार 'नोट आफ डिसेन्ट' लेख्दै आएका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले खनाललाई समर्थन गर्ने दाहालको प्रस्तावको सशक्त विरोध गरेपछि उनी बैठकमै रोएका थिए। यो भावुक प्रस्तुतिले उनी निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनलाई समेत रुवाएको थियो। गच्छदारले १ सय १७ मत ल्याउने र कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको १ सय १४ मात्र पुग्छ भन्ने अनुमान थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने गच्छदारलाई भारतले उम्मेदवार बनाएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पुगे। एमाले अध्यक्ष खनालको लगाव माओवादीतर्फ भए पनि एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीका कारण नेपाली कांग्रेससँग निकटता र सहकार्य चल्दै आएको थियो। यसैकारण माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मुद्दामा दबाब दिन सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको विदाइ र शक्तिखोर समारोह यसैका परिणाम थिए।बाबुराम भट्टराई पक्षीय ५१ जना सांसदले खनाललाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध लिखित रूपमै गरेर दाहाललाई बुझाएपछि देखिएको अन्योलले झन्डैझन्डै एमालेमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेपछिको स्थितिजस्तो देखिएको छ थियो ।दाहालले एमाले अध्यक्ष खनाललाई विजयी बनाई कांग्रेससँगको साथ छोडे पनि एक हिसाबले एमालेलाई एकताबद्ध बनाइदिएका छन्। खनालको नेतृत्वमा माओवादीले सरकार बनाएर दाहालले आफूलाई 'किङमेकर' साबित गरे पनि भविष्यमा उनले चाहेजस्तै सजिलै यो सरकार भत्किइहाल्दैन।
खनालको बदलिदो जीवनशैली
एकजना सुरक्षाकर्मीका साथ डुली हिंड्ने झलनाथ खनालले बिहीबार रातिदेखि थप ३६ सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । माघ २३ गतेपछिको खनालको दैनिक यात्रा मर्सिडिज कारमा सरर रहनेछ । देवीप्रसादको भापड साच्चै खनालको लागि भाग्यको संकेत रहेछ । किनकी भmापड खाएको ३ हप्ता नबित्दै खनाल देशकै प्रधानमन्त्री पदमा पूग्न सफल भए । राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट प्रधानमन्त्री पदको आइतवार सपथ ग्रहण गरेपछि खनालले सुविधा सम्पन्न 'मर्सिडिज' कार आवाशको साथमा सेनाको अंगरक्षकसहित थप दुईसय सुरक्षाकर्मी पाउनेछन् ।
शान्ति र संबिधानका लागि लोकतान्त्रिक विचारको विजयी अन्तत ७ महिनादेखिको नेकपा एमाले लोकतान्त्रि प्रजातान्त्रिक बिचारको विजयी पाएको छ । शान्ति र संविधानका लागि सबैलार्इ समेटेर लैजाने दायित्व र कर्तव्यलार्इ पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । नेपाल र नेपाली राजनीतिको समस्या समाधान हामी आफै. सुल्भmाउन सक्ष्ाम छौ. । कसैलार्इ गुहानर्ुपनर्े जरुरत देखेको छैन मैले । हामी देश र जनताका लागि इमान्दा र विश्वासको पात्र बन्न सकै सबै समस्या हल हुनेछन्‍ । चुनौती नै चुनौतीकाबीच ठूलो जिम्मेवारी पाएको छु । यो चुनौतीलाई ठीक ढंगले पहिचान गर्नु राष्ट्रका सामु रहेका अवसरलाई पक्रनु हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्णर् काम हो । यसका निम्ति शान्ति र संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि सिंगो राष्ट्र र आम जनसमुदाय शान्ति र संविधान पूर्णता देख्न चाहिरहेका छन् । तोकिएको समयभित्र शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पुर्‍याउने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई नै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्घ र गोलबन्द गरेर अघि बढ्छु ।
मधेसका पार्टीहरूलाई मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर म एकताबद्घ गर्छु । मधेसका मुद्दालाई सरकारले दृढतासाथ अघि लान्छ । त्यही आधारमा सिंगो मधेस परिचालित हुन्छ र तराई मधेसका सम्पूर्ण जनता र राजनीतिक शक्ति पनि परिचालित हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई तीव्रता दिदै, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन हामी अहोरात्र खटिनेछौ।
वामपन्थी ध्रुवीकरणले पनि मुलुकलाई हित गर्दैन र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणको नाममा अन्य प्रकारको गठबन्धनले पनि मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले अहिले ध्रुवीकरण होइन, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्घ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुक हो । यो देशमा कस्तो सरकार बन्नुपर्छ, यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले निर्णय गर्‍यौं । यो नेपालीको बुद्घ िर विवेकले बनेको सरकार हो र नेपालीको बुद्घि र विवेकले नै सञ्चालन हुन्छ । यस्तो सरकार बन्दा हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरू खुसी हुनेछन् । हाम्रा भारतीय र चिनियाँ मित्रहरूलाई यो खबरले अत्यन्त उत्साहित र खुसी पार्नेछ भन्ने विश्वास छ । साझा नीति र साझा कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौं र मुलुकका साझा कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्छौं ।
प्रधानमन्त्रीको निर्बाचन समयको बर्बादी मात्र आज हुने प्रधानमन्त्री निर्बाचनको मैदानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारन उमेद्वार खडा भएका छन् । मेरै संसार भने झै आफु बाहेक कसैले निर्बाचनमा नजित्ने बहानाबाजी गर्नसमेत पछी नपर्ने चारै जना उमेद्वारहरुले आफ्नो उमेद्वारी दर्ता गरेर संविधानसभा भवनबाट निस्कने क्रममा आफु प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेका थिए । तर आज पुन त्यहिँ नेताको मुखबाट पहिलो चरणको निर्बाचन निरर्थक हुने प्रतिक्रिया आएको छ त्यसले पनि अझ प्रस्ट देखिन्छ उनीहरु सुद्रिएको छैनन् भन्ने । प्रत्यासी कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसक्ने उनीहरु उनीहरुको दाबी छ । जसले बाह्र वर्ष कुकुरको बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा हाल्यो जस्ताको तस्तै भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । नेताहरुको यो अर्को नौटंकीले उनीहरुको बिश्वास गुमेकै छ तर नेपाली जनता अझैपनि दैर्यताका साथ बस्नु सिबाय अरु केहि गर्ने ठाउँ पनि बाकी छैनन् ।कतिदिनसम्म उनीहरुले यसरि दाबी गर्ने र छोड्ने हो । प्रमुख तीन दल र मधेसी दलले पनि आ-आफ्नै उम्मेदवार उठाएका कारण संसदमा आज १ बजे हुने निर्बाचन अघि कसैले फिर्ता नगरी सबै उम्मेदवार कायम रहे परिणाम कुनै पनि उमेदवारले सफलता हातपार्ने छैनन् ।
यसै बीच एकीकृत नेकपा माओवादीका एकसय जना सभासदहरुले निर्बाचन बहिस्कारको तयारी गरेकाछन । उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराई निकटकासभासदहरुले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने कसरत अघि बदयेपछी निर्बाचन बहिस्कारको तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्बाचनमा आफूले जित्ने सम्भावना कम भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाएको सभासदरु असन्तुष्ट भएका छन् ।
प्राय जसो सबैको यस्तै गति छ । लाज पचीसकेका नेताहरुले अझैपनि देशको भलोको लागि केहिपनि कदम नचल्ने हो भने नेपालीजनाताको धैर्यता प्रतिकारमा परिणत गर्नुको विकल्प छैन ।
भोलिको चुनावको नतिजा अहिले ...
1 |2|3|4|5|6|7| 8 |9[ Next ] [ Last ] Add New Blog